डिल्ली मल्ल | मंसिर १४, २०७६ शनिबार | 0
दिदी प्रगति अर्थात कुश्मा महरा । एक जनकलाकार, सफल गायिका, देश र दुनियाँ बदल्ने महान यात्रामा यात्रारत अविचलित योद्धा ।
शायद यतिले मात्रै उनको सबै परिचय पूरा हुँदैन । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराकी कान्छी छोरी । वर्गसंघर्षको केन्द्र रोल्पाको महरा परिवार साँच्ची दश वर्षे जनयुद्धको इतिहासमै एउटा आदर्श, उदाहरणीय र सच्चा क्रान्तिकारी परिवार ।
सदरमुकाम लिवाङकै छेउँमा हाम्रो घर थियो । बुवा कम्युनिष्ट भएकै कारण तत्कालीन सरकार र प्रशासनको आँखाको कसिंगर बन्नुभएको थियो । जनयुद्धको शुरुवात हुनुपूर्व नै बुवा भूमिगत बस्नुपर्ने बाध्यता भयो । जनयुद्धको थालनी भइसकेपछि त झन पुलिसको बिगबिगी बढ्न थाल्यो । त्यसपछिका दिनहरु यति कष्टप्रद बिते कि मैले शब्दमा व्यक्त गर्न नै सक्दिन ।
हाम्रो लागि पुलिसको गालीगलौज, कुटपिट र धाकधम्की त सामान्य भइसकेका थिए । दानवहरुको हुलले कहिले मध्यरातमा आएर ढोका हान्थे, कोठा.कोठा, बुइँगल र भकारी जम्मै हेर्थे । अन्नपात जहाँतहीं पोखिदिन्थे, केही नभेटेर रिसले मुर्मुरिदै फर्किन्थे । कहिलेकाहीँ एक दुईजना मात्रै साधारण भेष गरेर आउँथे ।
हामी यसरी बाँचिरहेका थियौं कि मृत्यु हरपल आँखै अगाडि घुमिरहन्थ्यो । कतिबेला घरमा आगो लगाइने हो ? कतिबेला गोलीले उडाइने हो ? सन्त्रास र भयको कालो बादल सधैं मडारिरहन्थ्यो । तारबारको जेलभन्दा पनि अझ कठोर जेलमा कैद थियौं हामी । सधैं दुश्मनका भरौटेहरु आएर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइरहन्थे ।
जब सूर्य अस्ताउँदै पश्चिममा हराउँथ्यो र कालो रातले पृथ्वीलाई छोप्दै ल्याउँथ्यो, हाम्रा मनहरुमा पनि सन्त्रासको कालो बादलले छोप्दै ल्याउँथ्यो । जब बिहान हुन्थ्यो, मन केही हलुका त हुन्थ्यो तर घरको भित्तामा मृत्युपूर्जी टाँसिएको हुन्थ्यो ।
कहिलेकाहीँ अज्ञात स्थानबाट बुवाले पठाएका पत्रहरु आउँथे । हामीलाई ती पत्रले मार्गदर्शन गरिरहन्थे । पत्रहरु प्रेरणा बन्दथे । दुश्मनद्वारा लुछिएका, चुडिएका तनमनहरुमा मल्हमपट्टी हुन्थे ।
हामी ओछ्यानमा पल्टिए पनि निदाइसकेका थिएनौं । एक्कासी ‘ढ्याम्म’ कसैले ढोकामा जोडले लात्ती बजार्यो । ढोका हानेको आवाजसँगै ‘ए राँडी ढोका खोल ।’ को एउटा कर्कश मानवरुपी पशुको आवाज पनि आयो ।
‘उफ !’ लामो सुस्केरा हाल्नुभयो आमाले । फेरि पनि कुकुरहरु आए, अब के के हुने हो ? हाम्रो मनमा सन्त्रास, भय र आक्रोश एकैपटक उब्जियो । बाहिर झ्याल, ढोकामा लात्तीले हिर्काउने क्रम जारी थियो । अश्लील शब्द बोल्दै राक्षसहरु आँगन, करेसा सबैतिर होहल्ला गरिरहेथे । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्थ्यो कि दुश्मनहरु धेरै आएका छन् ।
पहिलेभन्दा त्यसदिन आएका दुष्टहरु बेग्लै थिए । कपडा पनि टाटेपाटे, अनुहार देख्दैमा डरलाग्दो मान्छे खाने दानवजस्तो । ३÷४ जना आएर आमालाई झम्टे, कपाल लुछ्दै राइफलको कुन्दाले हिर्काउन थाले ।
माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङनजिकै मेवाङस्थित घर । जुन घरबाट उनीहरु स–परिवार २०५४ साउन २९ गते शुक्रबार राति निस्किएका थिए ।
अरु २ जना आएर हामी ४ भाइबैनीलाई पनि गालामा बेस्सरी हिर्काए । भाइ डाँको छोडेर रुन थाल्यो । दुष्टहरुले भाइलाई झन अरु कुटे । दिदी, दाइ र म चुपचाप उभिइरह्यौं । आवाज निकालेर रोयो भने झनै कुटाइ खानुपथ्र्यो । मन रोइरह्यो, आँखाभरि आँशु भरिएका थिए । दुष्टहरुले आमालाई कुटिरहेको हामीले मुकदर्शक बनेर हेरिरहनुपर्ने भयो ।
‘तेरो राँडो कहाँ बस्छ ?’ – ‘था छैन ।’
फेरि शुरु भयो बुट र कुन्दाको काम । केहीछिनपछि बाहिरबाट अर्को राक्षस आयो । शायद त्यो अलि ठूलो हुनुपर्छ । ‘केटाहरु हो, यसले भन्दिन । आज यो राँडीलाई नै सुट गर्नुपर्छ, अनिमात्र सबै कुरा ठिक हुनेछ ।’
‘ए राँडी कपडा लगा । केही भन्नु छ भने तेरा छाउरा छाउरीलाई भन् । केही दिनुछ भने पनि दिए हुन्छ । अब फेरि तेरो यिनीहरुसँग कहिल्यै भेट हुँदैन बुझिस् ?’ आमातर्फ फर्केर ठूलो दानव करायो । आमा मौन रहिन् ।
मलाई झट्ट बुवाको याद आयो । बुवा अहिले कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ होला ? हाम्रो यो हालत, आमाको यस्तो अवस्था । मुटु भक्कानिएर आयो तर के गर्ने ? आमाको अँगालोमा झुण्डिएर बेस्सरी रुन मन नलागेको त कहाँ हो र ? तर, बीचमा दुष्ट दानव उभिएको थियो ।
आमाले धौ–धौसँग भन्नुभयो, ‘राम्रोसँग बाँचेर बसे । नराम्रो काम कहिल्यै नगरे’ आमाको गला अवरुद्ध भयो ।
बोल्दाबोल्दै दिदी प्रगतिले लामो सास फेरिन् । शायद उनलाई आमाको त्यो शब्द अहिले भर्खर भनेजस्तो लागिरहेछ । मानौं, उनी अहिले दुष्टको पञ्जामा परेकी आमाको अगाडि निरीह भएर उभिरहेकी छिन् । धाराप्रवाह उनको बोलीमा केही भिन्नता आएको छ अहिले । एकपटक खोकिसकेपछि उनले बाँकी बृतान्त फेरि शुरु गरिन् -
एक्कासी एउटा करायो, ‘भागी, भागी ए त्यो रण्डी भागी ।’ अर्को आवाज आयो, ‘ठोक ठोक सालेलाई ।’
घरबाट त निस्कियौं तर कहाँ जाने ? रातको करिब २ बजेको छ । ‘रानो बिनाका मौरीझैं’ हाम्रो बेहाल थियो । आमालाई के भयो होला ? कतै दुष्टले ...? हाम्रो यो हालत, बुवा कहाँ हुनुहुन्छ होला ?’
दुश्मनद्वारा घरबास लुटिँदा, तनमन चिथोरिँदा पीडा त अवश्य थियो तर मृत्युको मुखबाट फर्किएर आएझैं आमालाई पाउँदा खुशीले बेसरी रोयौं । घरमा भने दुष्टहरु आतंक मच्चाइरहेथे । सामानहरु यत्रतत्र फालेको मधुरो आवाज सुनिन्थ्यो ।
हो, लिवाङस्थित हाम्रो त्यो सानो घर, जसलाई सधैंको लागि छोडेर हिड्यौं । त्यो भन्दा कैयौं गुणा विशाल घर, लाखौंलाख उत्पीडित, उपेक्षित जनसमुदायको आस्था र विश्वासको धरोहर महान् क्रान्तियात्राको विशाल घर । जहाँ सधैं सन्त्रासको घेराभित्र बाँचिरहनु पर्दैन, खुल्ला आकाशमा पखेटा फटफटाउँदै उड्ने पंक्षीजस्तै स्वतन्त्र जिउन सकिन्छ ।
(पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा यतिबेला डिल्लीबजार सदरखोरमा हुनुहुन्छ । उहाँको त्याग, समर्पण, संघर्ष र सिङ्गो परिवारले क्रान्तिका लागि गरेको त्याग पानीको फोकाजस्तो देखिएको छ । उहाँ आफै ओझेलमा परेजस्तो देखिएको छ । यद्यपि, सिङ्गो १० वर्षे जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा देखिएका निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको अनेकौं उदाहरणमध्ये स्वयं महरा पनि एक थिए । महरा परिवारले २०५४ साउन २९ गते घर छोड्दाको कारुणिक, मर्मस्पर्शी र पीडादायी क्षण अर्थात अन्तिम रातलाई यसरी आफ्नो शव्दमा उन्नुभएको छ डिल्ली मल्लले । हाल प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका पत्रकार तथा साहित्यकार मल्लले युद्धकाल अर्थात २०६२ बैशाख १३ गते गोठादी पाल्पामा बसेर यो संस्मरण लेखेका हुन् ।)